‘नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काईसौं शताब्दीको उचाईमा पुरयाउनेगरि काम गर्छु’( राजदुत आचार्य-Nznepal.com
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ईपिजीको प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको तर्क गरे । आचार्यले भने,‘प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो । त्यो भन्दापनि अगाडि जानुहुन्छ भने दुई देशका बीचमा उच्चस्तरबाट सहमति हुनु, १९५० को सन्धिलगायत सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौताहरुको पूरावलोकन गरेर के के कुरामा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई हेर्न सहमत हुनु नै पनि उपलब्धि थियो । त्यो राजनीतिकस्तरमा भएको हो । त्यो पनि कस्तो भन्ने भन्दादेखि विभिन्न बेलामा भएको हो । अहिले मोदीजी आईसकेपछि मात्रै होईन । मोदीभन्दा पहिलेबाट पनि त्यो प्रक्रिया चाहनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ मनमोहनजीको प्रधानमन्त्रीको कालदेखि र यहाँ पनि मनमोहन अधिकारीजीको कालदेखि चलिआएको हो । चाहे गिरिजा प्रसाद कोईराला भन्नुहोस् । चाहे सुशिल कोइराला भन्नुहोस् । प्रचण्ड भन्नुहोस् । केपी शर्मा ओली भन्नुहोस् । नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गरेर राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको सहमतिका साथ अनि ईपिजी गठन भएको हो ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ईपिजीले तोकिएकै समयसिमाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारे । उनले ईपिजी गठन गर्नकै निमित्त ८ जना नियुक्ती भएको बताउँदै भने,‘चार जना नेपालबाट र चार जना भारतबाट । यो अर्को उपलब्धि थियो । धेरै कुराहरु के हुन्छ भने गर्ने भन्छन् तर कार्यान्वयनमा जाँदैन् । तर, यो त संयन्त्र नै बनाईयो । कतिपयले प्रतिवेदन बनाउँदैन कि भन्नेथियो । तर, साझा र सहमतिको प्रतिवेदन तयार भयो । दुई वर्षको कार्यकाल थियो । कार्यकालभित्रै टुँग्यायो ।’
आचार्यले ६ महिना बितिसक्यो तर समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन भनेर भन्नु भन्दापनि केही समय धैर्यता गर्नुपर्ने सुझाए । उनले भने,‘प्रतिवेदन बुझ्दैनन् । बुझ्न सकिँदैन भनेर शंकै शंकामा पर्ने हो भने त्यसको उपाय निस्कँदैन् । केही अप्ठ्याराहरुलाई हामीले बुझिदिएर धैर्य साथ काम गर्नुपर्छ । बुझ्दैनौं त भनेको छैन नि । अध्ययन गर्दै होलान् । हेर्दै होलान् । उपयुक्त वातावरणमा र उपयुक्त समयको पर्खाईमा होलान् ।’
यद्धपी उनले ईपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशको सरकारसमक्ष पेश भैसकेपछि अनि सरकारले यसलाई अध्यन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने वा जे गर्ने हो सरकारले गर्ने तर्क गरे । उनले भने,‘अहिले त ईपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारहरुले बुझ्नु भएकै छ । पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुहुनेछ । त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुहुनेछ । ईपिजी त्यसको पर्खाईमा छ । अहिले म ईपिजीमा छैन । ईपिजीको कार्यकाल असार २० गते समाप्त भयो । तर, यस बीचमा केही काम गर्नुपर्यो वा ईपिजीको तर्फबाट केही भन्नुपर्यो भने सह–संयोजकहरु हुनुहुन्छ । नेपालको तर्फबाट डा. भेषबहादुर थापा हुनुहुन्छ।’
भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा घट्नको निम्ति भारतबाट नेपालमा संयुक्त आयोजनाहरुमा लगानी गरेर उत्पादन बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भने,‘उत्पादन बढाएर हाम्रा वस्तुहरु त्यहाँ निर्यात गर्नुपर्छ । अहिलेकै समयमा पनि सिमामा के कति अप्ठ्यारा छन् ? धेरैजसो क्वारेन्टाईनको समस्या छन् । धेरैजसोले अन्य झन्झटहरु छन् भन्छन् । के कति अप्ठयारा छन्, तीनलाई हल गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै नेपालले पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि नेपाल र भारतबीच आदान–प्रदान हुनसक्ने सुझाए । उनले भने,‘हामीमात्रै स्वास्थ्यलाभ गर्न भारत जाने होईन । भारतबाट पनि खास गरेर आँखाको औषधोपचार गर्न नेपाल आउँछन् । नेपाल–भारत सम्बन्धबाट भारतलाई पनि फाईदा भएको छ । नेपाललाई पनि फाईदा भएको छ । तर, व्यापार घाटा नेपाललाई अत्यन्तै कहालीलाग्दो छ । यसलाई घटाउनको निम्ति मैले अघि भनेका कुरामा जोड दिनुपर्छ । अहिले भएका अप्ठ्याराहरु हटाउँदै नयाँ सम्भावनाहरु, नयाँ उत्पादन, नयाँ सेवाको आदान–प्रदानलाई बढावा दिन्छौं।’
आफू भारतसँगको मित्रता बलियो पार्न र दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही दुरी छ भने त्यसलाई कम गर्नको लागि केन्द्रित हुने उनको विश्वास छ । उनले भने,‘दुरी कम गर्न केही कारणहरु छन् भने कारणहरु हटाउन र शंकाको वातावरण छ भने शंका निवारण गर्न, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न र वृद्धि गर्न, केही हामीले गर्नुपर्ने काम बाँकी छन् भने हामीले गर्ने र उताबाट गर्न बाँकी छन् भने उतातिरबाट गर्न जोड दिने । हामीबीच विभिन्न सम्झौता भएका छन् । विभिन्न आयोजनाहरु पूरा गर्ने भएका छन् ।’
भारतले नेपालको विकासमा साझेदारको रुपमा धेरै सहयोग गरेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे । आचार्यले भने,‘कतिपय आयोजनाहरु समयमै पूरा नभएकाहरु समयमै पूरा गर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यसैले विश्वासको वातावरणमा हामी दुई देशका बीचमा भ्रमणहरुको आदान–प्रदान उच्चस्तरलगायत विभिन्न स्तरमा, १७ वर्षपछि उच्चस्तरीय भ्रमणहरु आदान–प्रदान बाक्लिएको छ। यो आँफैमा एउटा उपलब्धि हो । विश्वासको वातावरण बनाउनको लागि भए÷गरेका सम्झौता, वचनबद्धता समयमै पूरा गरिउन भनेर प्रयास गर्नु अर्को एउटा प्रमुख कार्य हो ।’
उनले भारत होस वा नेपाल होस् बोलेको र भनेको कुरा पूरा गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले थपे,‘भन्नुहोस न भुकम्पपछिको पूर्ननिर्माणका कुरा होलान्, कतिपय आयोजनाका कुरा होलान् । त्यस्तै हाम्रा सिमाहरु मैत्रीपूर्ण होउन् । त्यहाँ के–के कठिनाई छन् । मानव तस्करीको कुरा आउँछन् । अहिले नयाँ क्षेत्र जलवायु प्रदुषणको कुरा छ, भारतमा प्रदुषण भयो भने नेपालमा पनि असर पुग्छ । जलवायु, हावाले सिमा भन्दैन् ।’
दुई देशबीच केही समस्या भए वार्ता तथा सम्वादमार्फत केही अप्ठयाराहरु भए हटाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘हिजोको कुरा कोट्याउनुभन्दा हिजोको कुराबाट पाठ सिकेर भविष्यलाई हेर्ने हो । भविष्यमा कसरी हामीले नेपालको राष्ट्रिय हितको निम्ति अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने कुरालाई हेरेर काम गर्ने हो । त्यसैले नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीति, निर्देशन र प्राथमिकताअनुसार राजदुतहरुले आफ्नो काम गर्ने हो । म पनि त्यही गर्छु।’
उनले अघि थपे,‘अहिले मलाई तपाईहरुको सद्भावले नेपाल र भारतका बीचमा मित्रता गहन पार्ने, सहयोगलाई अझ विस्तार र गहकिलो पार्ने जिम्मेवारका साथ सरकारले राजदुतमा नियुक्त गरेर भारत पठाउँदैछ । तपाईहरुको भारतप्रतिको सद्भावना नेपालको भारतीय जनताप्रतिको सम्मान, त्यस्तै भारतीय जनताको नेपाली जनताप्रति सम्मान, सार्वभौम समानताको सिद्धान्तबाट सम्बन्ध अगाडि बढाउने, अहिलेको २१ औं शताब्दीको उचाईमा सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने, गहन गर्ने र बलियो बनाउने आकांक्षा नेपालीको पनि छ । र, भारतीय जनताको पनि छ भन्ने कुरा विश्वास छ । तपाईहरुको यही सद्भाव लिएर म जाँदैछु ।’
उनले अघि भने,‘मलाई आशा छ, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा केही योगदान दिन तपाईहरुको सद्भावले मद्दत गर्नेछ । हाम्रा सम्बन्ध केही समय केही अप्ठ्यारामा परेका थिए । तर, अप्ठ्याराहरुलाई सहज बनाउने दिशामा प्रगति पनि भएका छन् । केही नयाँ नयाँ समभवनाहरु उठिरहेका छन्। व्यापार, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, सामाजिक–साँस्कृति, शैक्षिक सम्बन्धका साथसाथै नयाँ नयाँ क्षेत्रहरु जलवायुको क्षेत्रमा, हाम्रा सिमाहरुमा के–के अप्ठ्यारा छन् । दुई देशबीच सडक सञ्जालदेखि अहिले रेलमार्ग र जलमार्गको पनि कुरा उठिरहेको छ । त्यस दिशातर्फ भारतमा काम भैरहेको छ । हामीकहाँपनि त्यसको तयारी भैरहेको छ ।’
आचार्यले नेपाल र भारत दुई देशबीचको व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने र नेपालमा लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे अहिले प्रयास भैरहेको सुनाए । उनले भने,‘ दुई देशबीच साझा आयोजनाहरु कसरी सुगमताका साथ सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?, दुई देशबीच सरकारी तहमा, निजी क्षेत्रको तहमा र जनस्तरको तहमा पनि सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि अहिले प्रयासहरु भैरहेका छन् ।’
नेपाल–भारत सम्बन्धमा राम्रो संभावना रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘ती सम्भावनाहरुमा बाधा नआउन् । त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दै जाउँ र हाम्रा सम्बन्ध दुई स्वाधिन सार्वभौमसत्तासम्पन्न अत्यन्तै निकटतम छिमेकी देशका बीचका सम्बन्धसरह एक्काईसौं शताब्दीको उचाईमा पुगुन भन्ने अपेक्षा र त्यसमा सहयोग पुर्याउने र, नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई एउटा राजदुतवासको प्रमुखको हैसियतले भारतमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा म दत्तचित्त रहनेछु । तपाईहरुको माया र स्हनेले मलाई मद्दत गर्नेछ ।’
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार व्यक्तित्व राजदुत भएर जान लागेको भन्दै पत्रकार ऋषि धमलाले आचार्यलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिए । उनले आचार्यको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै सुमधुर बन्ने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘उहाँ अत्यन्तै सफल कुटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ । उहाँको कार्यकालमा द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर र प्रगाढ बन्ने हामीले आशा गरेका छौं ।’